फाकफाेकथुममा युथ फाउण्डेसन गठन - Nayabulanda.com
फाकफाेकथुममा युथ फाउण्डेसन गठन
अध्यक्षमा विकास राई
नयाँ बुलन्द १ कार्तिक २०७७, शनिबार १९:५१ 1034 पटक हेरिएको
फाकफाेकथुम : इलामकाे फाकफाेकथुम गाउँपालिकामा “फाकफाेकथुम युथ फाउण्डेसन” गठन भएकाे छ । शनिबार भएकाे फाकफाेकथुमस्तरीय भेलाबाट फाउण्डेसन गठन गरिएकाे हाे । विशेष गरी युवाकाे क्षेत्रमा काम गर्नकाे लागि गठित फाउण्डेसनले युवालाई स्वराेजगार बनाउने र युवा जनशक्तिलाई मुलुककाे सम्बृद्धिसँग जाेड्नकाे लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने वताईएकाे छ ।
विकास राईकाे अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय गठित फाउण्डेसनकाे उपाध्यक्षमा सबिन बुढाथाेकी, सचिवमा चन्द्रप्रकाश बाेहाेरा, काेषाध्यक्षमा ममता खनाल र सहसचिवमा रत्न राई चयन भएका छन् ।
फाउण्डेसनकाे सदस्यहरुमा बुद्धिमान तामाङ, इन्द्र पाैडेल, चन्द्रकला बर्देवा, अजया केसी, सूर्य पाैडेल, रुद्र थापा, राम काेईराला, भक्तवहादुर राई र पञ्च वहादुर याेङहाङ लिम्बू रहेका छन् ।
फाउण्डेसनले सबभन्दा पहिले वैधानिक रुपमा यसकाे दर्ता प्रक्रियामा जाने अनि मात्र अन्य कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष विकास राईले जानकारी दिए । पालिमामा बढ्दाे भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने फाउण्डेसनले वताएकाे छ । यसैगरी फाउण्डेसनले मूख्यगरी युवा जमातलाई कृषिसँग जाेड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वताईएकाे छ ।
लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्ध सचेतना गराउने र खेलकुद, मनाेरञ्जन लगायत नेतृत्व विकास, क्षमता अभिबृद्धि लागयतकाे कार्यक्रमकाे माध्यमबाट युवालाई अग्रसर गराईने फाकफाेकथुम वडा नं. ७ का वडा सदस्य पञ्चवहादुर याेङहाङले जानकारी गराए ।
फाउण्डेसन गठन कार्यक्रम फाकफाेकथुमका अग्रज समाजसेवी तथा बुद्धिजिवी छत्रवहादुर याेङहाङ (सि.वि.) काे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे छ ।